सेतीमा साताको २ दिन माछा मार्न प्रतिबन्ध- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
सेतीमा साताको २ दिन माछा मार्न प्रतिबन्ध
लकडाउनले गर्दा हुलका हुल मानिस नदीमा जान थालेपछि भएका माछा पनि सखाप हुने डरले प्रतिबन्ध लगाइएको संरक्षण समूहले जनाएको छ ।
जेष्ठ १६, २०७७ वसन्तप्रताप सिंह
बझाङ — लकडाउनको समयमा अत्यधिक माछा मार्न थालिएपछि बझाङको सुवेडाका बासिन्दालाई माछा मार्ने कार्यमा कडाइ गरिएको छ । माछाको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको भन्दै सुवेडाका स्थानीयले सातामा दुई दिन माछा मार्न नपाइने निर्णय गरेका छन् ।
जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं ७ का करिब ८५ घरधुरी सदस्य रहेको तमैल कचाला धौलाबगर जलचर संरक्षण समूहले आफ्नो भूगोलभित्र पर्ने (धौलाबगरदेखि तमैलसम्म) सेती नदी र कचाली खोलामा सोमबार र बिहीबार माछा मार्न बन्देज लगाएको हो ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण धेरै मानिस गाउँ फर्किएको र उनीहरुले दैनिक नदी खोलामा गएर माछा मार्दा जैविक विविधता नै बिग्रने अवस्था हुन थालेपछि माछा मार्न कडाइ गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘अहिले बाहिरका मानिस घर आएका छन् । लकडाउनले गर्दा धेरैजसो युवाको काम माछा मारेर दिन काट्ने भएको छ,’ समूहकी सचिव पूर्णिमा विकले भनिन्, ‘यति धेरै मान्छेले लगातार माछा मार्दा माछा नै सकिने चिन्ता भयो । हप्तामा दुई दिन भए पनि बन्द गर्न सके बिउ त बचाउन सकिएला भनेर यो निर्णय गरेका हौं ।’
निर्णय कार्यान्वयनका लागि समूहका सबै घरपरिवारमा सूचना जारी गरिएको अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंहले बताए । उनका अनुसार साताको दुई दिन समुदायले गस्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘उसै पनि सेतीमा पाइने धेरै प्रजातिका माछा लोप भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनले गर्दा हुलका हुल मानिस नदीमा जान थालेपछि भएका माछा पनि सखाप हुने डरले प्रतिबन्ध लगाएका हौं ।’ समूहको निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई जयपृथ्वी नगरपालिकाको जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गरिने उनले बताए ।
बझाङको सेती नदीमा पाइने असला माछा स्वादका हिसाबले देशैभर प्रख्यात भए पनि पछिल्लो समय यसको संख्या निकै घटेको मछवारहरुले बताउने गरेका छन् । जालको प्रयोग, करेन्ट र विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्दा साना माछा पनि मर्ने भएकाले यो निर्णय उचित भएको सुवेडाका कृष्णबहादुर थापाले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १८:२२
संक्रमण बढ्दै, उपचार र व्यवस्थापन सुस्त
जेष्ठ १६, २०७७ कर्णाली प्रदेश ब्युरो
सुर्खेत — प्रदेश र स्थानीय सरकारको तयारी नपुग्दा कर्णालीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ । तर उपचार, परीक्षण र सतर्कता भरपर्दो नहुँदा संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने जोखिम बढिरहेको हो ।
भारतबाट मजदुरी गरी फर्किएका स्थानीयलाई परीक्षणबिनै सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइँदा संक्रमण बढिरहेको हो । कर्णालीमा शुक्रबारसम्म ४६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । जेठ महिनामा झण्डै १५ हजार व्यक्ति फर्किए पनि २ हजार जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
‘सम्भावित संक्रमितहरू गाउँ–गाउँ पुगेका छन्, रोकथामका लागि सावधानीमा कुनै ख्याल गरिएको छैन,’कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भने, ‘क्‍वारेन्टाइनभित्रै संक्रमण फैलियो भने पनि नियन्त्रण निकै गाह्रो हुनेवाला छ, हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्न मुस्किल छ ।’ यसका लागि परीक्षण र व्यवस्थापनको अवस्था सुधार्नुका साथै सामान्य संक्रमितलाई सम्बन्धित स्थानमै उपचार (आइसोलेन) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटरको मात्र सुविधा छ । सबैजसो जिल्लाका अस्पताललाई कोरोना उपचार केन्द्र बनाइए पनि अधिकांशमा पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सकको अभाव छ ।
क्‍वारेन्टाइनमा नलको ओछ्यान
दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका–५ चिउरीखेतमा निर्माण गरिएको क्‍वारेन्टाइनमा गहुँको नलको ओछ्यान बनाएर भारतबाट फर्किएका नागरिक सुत्दै आएका छन् । गाउँपालिकाले पुरानो गाविस भवनलाई क्‍वारेन्टाइन बनाएको थियो । क्‍वारेन्टाइनमा बसेकाले खानाको व्यवस्थासमेत राम्रो नभएको गुनासो गरेका छन् ।
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका –५, चिउरीखेतमा गहुँको नल ओछ्याएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु । तस्बिर :ज्योति कटुवाल/कान्तिपुर
क्वारेन्टाइनमा बस्दा अनेकौं सास्ती भोग्नुपरेको इन्द्रजंग शाहीले बताए । ‘ओछ्यान पनि थिएन, गाउँलेसँग मागेर नलको व्यवस्था आफै गरेका हौं,’ उनले भने, ‘कहिलेकाँही त रातभरि जाग्राम बस्छौं । होम क्वारेन्टाइनमा बस्न दिए बरु सुरक्षित भइन्थ्यो ।’ क्‍वारेन्टाइमा बस्दा झनै रोगले थला परिने जोखिम बढेको उनको गुनासो छ ।
५ दिनसम्म आएनन् स्वास्थ्यकर्मी
नारायण नगरपालिका–४, सोतस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा सामान्य चेकजाँच गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छैनन् । चेकजाँच नहुँदा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
विद्यालयलाई ५ दिनअघि क्‍वारेन्टाइन बनाइएको थियो । ‘न समयमा खाना छ न चेकजाँच,’ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी एक महिलाले भनिन्, ‘बिजुली सुविधा नहुँदा अँध्यारोमै रात बिताउँछौं ।’उनले एउटै कोठामा २२ जनालाई राखिएको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार विद्यालयका चार कोठामा ७९ जनालाई कोचाकोच राखिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ९ सय ६५ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएकोमा अहिले ५ हजार ४ सय ४३ जना बस्दै आएका छन् । लकडाउनको अवधिमा मात्रै करिब ७ हजार नागरिक भित्रिएको कार्यालयको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका फोकल पर्सन थीरप्रसाद रेग्मीले किट नहुँदा परीक्षण र स्वाब संकलन ठप्प बनेको बताए । उनका अनुसार भारतबाट फर्किएका नागरिकको कोरोना जाँच गर्न जिल्लामा कम्तिमा २० हजार आरडीटी किट आवश्यक छ । आइसोलेसनमा रहेका १५ जनाको अवस्था सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
अव्यवस्थित क्‍वारेन्टाइनले सास्ती
स्थानीय तहले भारतबाट फर्किएका नागरिकलाई सामान्य सुविधासमेत दिन नसक्दा कालीकोटका गाउँमा संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ । लकडाउनको अवधिमा मात्रै जिल्लामा करिब १५ हजार व्यक्ति फर्किएका छन् । तर परीक्षणबिनै अधिकांशलाई घर पठाइएको छ ।
‘जथाभावी भारतबाट ल्याइएकाबाट गाउँ सखाप हुने डर छ,’ खाडाचक्र–८ का लालबहादुर मल्लले भने, ‘गाउँमा जाँच गर्ने न स्वास्थ्यकर्मी छन् न उपकरण नै ।’ स्थानीय तहले बजेट सक्न आधारभूत पूर्वाधारबिनै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार गाउँका क्वारेन्टाइनमा पानी चुहिने चिसो भुइँमा त्रिपालमाथि पिफम र तन्ना ओछ्याएर भारतबाट फर्किएकालाई सुताउने गरिएको छ ।
अधिकांश क्‍वारेन्टाइन बस्‍न लायक नभएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बेडको संख्या घटाएर क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार अहिले एक हजार एक सय २६ जनालाई विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
कालीकोटको खाडाचक्र–३ ताडीस्थित तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेनटाइनमा बसेका व्यक्ति । तस्बिर: तुलाराम पाण्डे/कान्तिपुर
शुभकालिका गाउँपालिकाले भर्ताको डाँडोमा र रास्कोट नगरपालिकाले आरसिपी बजार नजिकै पाल टागेर क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित भएको गुनासो आए पछि खाडाचक्र नगरपालिकाले सदरमुकामको चन्द्र सूर्य होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ । अन्य होटेललाई पनि क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको नगरप्रमुख जसिप्रसाद पाण्डेले बताए ।
पाल टाँगेर बनाइएका क्वारेन्टाइन झारा टार्ने खालका मात्र भएको शुभकालिका–४ का नन्दकेश अधिकारीले बताए । ‘अधिकांश क्वारेन्टाइन घाम लाग्दा डढाउने र पानी पर्दा भिजाउने खालका छन्,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा बस्दा संक्रमणको जोखिम भएपछि त्यहाँबाट भागेर घर जाने क्रम बढेको छ ।’
संक्रमित भन्छन्–‘स्वास्थ्यकर्मीको हौसलाले कोरोना जितिन्छ’
वीरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालको आईसोलेसनमा एक हप्तादेखि चौकुने गाउँपालिकाका ३३ वर्षीय संक्रमित उपचाररत छन् । संक्रमित पुष्टि हुँदा सहज उपचार नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका उनी अस्पतालमा आरामपूर्वक बस्न पाउँदा हर्षित छन् ।
‘कोरोना लाग्यो भन्नेबित्तिकै अब उपचार नहुने भयो भन्ने चिन्ता थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले दिने हौसलाले पनि केही हुँदैन भन्ने लागेको छ ।’ अस्पतालमा उनीसहित ३२ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । बझाङका ५२ वर्षीय पुरुष र एकजना बोल्न नसक्ने ठेगाना नखुलेकी महिलाको पनि उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. केएन पोडेलले दैनिक चार/चार घण्टाको फरकमा संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने गरिएको जनाए ।
अस्पतालमा खाना र बस्नलाई समस्या नभएको आइसोलेसनमा बसेकाहरूको भनाइ छ । चौकुनेका संक्रमितले स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको बताए । संक्रमितका अनुसार अस्पतालमा सरसफाइका लागि पर्याप्त पानी र वासिङ मेसिनको सुविधा छ । संक्रमित सबैलाई आफ्नो ज्वरो र रक्तचाप नाप्न सिकाइएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका संक्रमित पुरुषले बताए ।
कोरोना विशेष अस्पतालका सुपरभाइजर डा. नवराज केसीले संक्रमितलाई शारिरीक र मानसिक रुपले बलियो बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र मानसिक रुपमा हौसला प्रदान गर्न विशेष हेरचाह गरिएको छ । अस्पतालमा अभिभावकको साथमा एक चार वर्षीय बालक पनि सँगै छन् । बच्चाको स्वाब टेष्ट गर्दा नेगेटिभ आए पनि आमासँग छुट्याएर राख्न नसकिएपछि अस्पतालमा राखिएको हो ।
बिरामी बस्ने प्रत्येक कोठामा एक–एकवटा बीपी सेट, डिजिटल थर्मोमिटर र अक्सिजनको अवस्था नाप्ने मेसिन (स्याचुरेसन प्रोब) राखिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार आइसोलेसन कक्षमा रहेका बिरामीको अवस्था बुझ्न डाक्टरले ड्युटी स्टेशनबाटै सीसीटीभी क्यामरामार्फत अवलोकन गर्छन् । संक्रमितको उपचारमा पहिलो चरणमा दुईजना चिकित्सक र दुईजना नर्स खटिएका छन् । डा. पौडेलले दुईजना चिकित्सकले १२/१२ घण्टा ड्युटी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा अहिले ७० वटा आइसोलेसन तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले भारतबाट संक्रमितसँगै आएका सबैको पीसीआर गर्ने तयारी गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख चेतननिधि वाग्लेका अनुसार भारतबाट संक्रमितसँगै आएका झण्डै दुई हजारको पीसीआर गर्ने तयारी सबैको पीसीआर गर्ने तयारी छ । ‘उनीहरुको आरडीटी त गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘आरडीटी नेगेटिभ देखिएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, तर पनि क्वारेन्टाइनमा रहेकाको जाँच गर्नेछौं ।’
तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), ज्योति कटुवाल (दैलेख) र चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर)